Madaxweyne ku xigeenka Kenya: Ciidamadeena lagama saarayo Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 6 May 2014 4 April 2019
Nairobi – Mareeg.com: Madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya, William Ruto ayaa sheegay inaysan ciidamadooda kala soo bixi doonin dalka Soomaaliya, arrinkaas oo uu soo jeediyey xisbiga mucaardika ee ODM.
William Ruto oo shir jaraa’id ku qabtay Nairobi ayaa sheegay in kuwa ugu baaqaya inay ciidamadooda kala soo baxaan Soomaaliya ay doonayaan in Kenya ka cararto cararto Soomaaliya oo ay weli ka taagan tahay dhibaato argagaxiso, sida uu yiri.
Wuxuu sheegay William Ruto inaan weli la gaarin hadafkii ciidamada Kenya u galeen Soomaaliya oo ahaa iney Kenya ka dhigaan meel nabad ah, islamarkaana jebiyaan Alshabaab.
“Ciidamadeena kam soo saareyno Soomaaliya, waxaan markii hore u geynay inaan amniga dalkeenna xaqiijino, kuwa doonaya inaan ciidamada kala baxno Soomaaliya waxey doonayaan inaan ka cararno cadow dadka cunaya, oo dhiig u baahan, kama bixi doono Soomaaliya, waana sii wadi doonaa dagaalka aan kula jirno Alshabaab, waana jebi doonaa” ayuu yiri madxweyne ku xigeenka Kenya, William Ruto.
Madaxweyne ku xigeenka Kenya ayaa tilmaamay iney diyaar u yihiin wax kasta oo ka dhashay joogitaanka ciidamadooda ee gudaha Soomaaliya.
“Waxaan qaadanaynaa go’aan adag, wixii ka yimaadana diyaar qayaan u nahay, waxaan doonaynaa in gobolka uu nabad noqdo, sidaa daraadeen ciidankeennu way sii joogayaan Soomaaliya” ayuu sidoo kale yiri William Ruto.
Ku-simaha hogaamiyaha xisbiga ODM, Anyang’ Nyong’o ayaa dhawaan u sheegay Wargeyska The Standrd ee kazoo baxa Kenya iney xilligaan markale ku qasabnyihiin iney dowladda xilka heysa ee Kenya ka dalbadaan iney ciidamada kazoo saarto Soomaaliya.
“Waxaan ku qasbanahay inaan markale soo jeedino su’aasha ah: Gorrmee ciidamadeenu kazoo baxyaan Soomaaliya?, Muxuu yahay qorshaha soo bixitaanka ciidamadeenna?, Aaway qorshii nabadda ee ahaa Kenya oo nabad ah iyo Soomaaliya oo degan?” ayuu yiri Anyang’ Nyong’o.
“Kenya wax wey ka sameysay Soomaaliya, annagana waxaa na gaaray dhibaato nagu filay, marka waxaan ku qasbanahay inaan mar kale ka dalbano dowladda iney la timaado khariirad cad oo ku saabsan kasoo bixinta ciidamada Kenya ee dalka Soomaaliya” ayuu sidoo kale yiri Anyang’ Nyong’o.
Akhri qodobadii ay soo saareen xildhibaano madaxweyne Xasan ugu baaqay is casilaad